ကင်ဆာကာကွယ်နိုင်သောလား? - အဆိုပါဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ပြည်နယ် Banner - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » ကနျြးမာရေးသတင်းများ "ကင်ဆာကာကွယ်နိုင်သောလား? - အဆိုပါဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ပြည်နယ် Banner
ကင်ဆာကာကွယ်နိုင်သောလား? - အဆိုပါဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ပြည်နယ် Banner
ဘုံအထင်လွဲမှားမှုများကင်ဆာသင့်မိသားစုအတွက် run မပါဘူးဆိုရင်, သင်ရောဂါကနေနှိုင်းလုံခြုံများမှာဒါကရှိပါသည်။ ဒါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။
ကင်ဆာ၏ရာခိုင်နှုန်းကို5မှသာလျှင် 10 အမျိုးသားကင်ဆာဌာန (NCI) selon, မိသားစုသို့မဟုတ်မျိုးရိုးလိုက်ကြသည်။ ဒါကပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသတင်းတွင်အကြမ်းအားဖြင့် 90 ရာခိုင်နှုန်းကိုရွက်။
ဒါကြောင့်အဲဒီ 90 ရာခိုင်နှုန်းကြီးမားတဲ့အချိုးအစားသင်ပြုသို့မဟုတ်မလုပ်ကြပါဘူးအရေးယူသို့မဟုတ်အဝတ်အနေဖြင့်အဓိကအားထားဒါကသင်ယူဖို့အံ့သြစရာဖြစ်နိုင်ပါစေ။ အမေရိကန်ကင်ဆာလူ့အဖွဲ့အစည်း (ACS) ဟာကင်ဆာရဲ့ရောဂါထက်ပိုမို 40 ရာခိုင်နှုန်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကျင့်ဖြစ်ကြ၏ပြောဆိုသော။
အများအပြားအချက်များကင်ဆာအန္တရာယ်ကိုတိုးပေးရန်။ တချို့ကသင့်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုထဲကဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါဖြစ်ပွားမှုအသက်အရွယ်နှင့်အတူတိုးတက်စေနိုင်ခြင်း။ ပုံး၏အကြမ်းဖျင်း 52 ရာခိုင်နှုန်းကို 55 နှင့် 74 ၏ entre les အသက်အရွယ်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ 34 ၏နှစ်အောက်ကင်ဆာနှိုင်းယှဉ်လျှင်နှိုင်းအဆနျးဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသင့်ရဲ့လက်လှမ်းမမီပြင်ပအခြားအချက်တစ်ချက် Reviews ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရှူရှိုက်လေကိုထိန်းချုပ်ရ, မကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာသို့မဟုတ် nozzle ကိုမီးရှို့ idling လို့မရပါဘူး။ မပြေးပြိုင်ပွဲသို့မဟုတ်ကျားမများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်။ ပွိုင့်များတွင်ဖြစ်ရပ်မှန် - အမည်မသိဆီးကျိတ်ကင်ဆာများ၏အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပွားမှုသည်းခံအကြောင်းရင်းများအတွက်အနက်ရောင်ယောက်ျား။
ရည်ရွယ်ချက်အများအပြားအချက်များသင့်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိပါတယ်။ အဆိုပါပြဿနာများစွာကိုမကလူ em သတိထားဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းနှစ်နှစ်ကင်ဆာသုတေသနများအတွက်အမေရိကန်အင်စတီကျု (AICR) icts ထုတ်ဝေ ကင်ဆာအန္တရာယ်ပွားစစ်တမ်း, ထိုရလဒ်များပုံပြင်ပြောပြပါ။ စစ်တမ်းဖြေကြားသူများ၏နေချိန်မှာ 93 ရာခိုင်နှုန်းကအရက်, လုပ်ငန်းများ၌နှင့်အနီရောင်အသား, အစားအစာနှင့်လှုပ်ရှားမှုမှ 40 ရာခိုင်နှုန်းကိုစွပ်စွဲကင်ဆာထက်ပိုနည်း, ဆေးရွက်ကြီးကင်ဆာအန္တရာယ်တိုးပွါးကြောင်းသတိပြုမိကြသည်။ အဲဒီအစားလူတွေအမဲသားများတွင်ဟော်မုန်းအလေးပေးနှင့်မျိုးရိုးဗီဇပြုပြင်ထားသောအစားအစာများကင်ဆာနောက်ကွယ်မှဗိုလ်မှူးတရားခံများမှာဒါကယုံကြည်ချက်မှတွယ်ကပ်။
ဝေးနေဖြင့်အဆိုပါအများစုမှာသိသိသာသာ Control အချက်ဆေးရွက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်သေဆုံးမှု, selon ၏ဦးဆောင်ကာကွယ်နိုင်သောအကြောင်းတရားများဖြစ်ပါသည် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အစင်တာများ, ဤတိုင်းပြည်တွင်အကြမ်းအားဖြင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်း 1,300 သေဆုံးမှုတွက်သည်။ ဒါဟာပင်နယ်တီအစက်အပြောက်ပေးဆောင်ဒါကသာဆေးလိပ်သောက်မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ပတ်ရစ်မီးခိုးထိတွေ့မှုကနေတစ်နှစ်ရလဒ်နှုန်း 41,000 သေဆုံးမှုထက်ပို။
ခရစ္စတိုဖာ Lathan, MD က MS, MPH, ကင်ဆာစောင့်ရှောက် Equity ဒါန-Farber ကင်ဆာအင်စတီကျုအဘို့ဌာနညွှန်ကြားရေးမှူး။ PHOTO: Dana-FARBER Cancer Institute
ဒါဟာကောင်းပြီရည်မှန်းချက်တကယ်တော့ဆေးရွက်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်နီးပါးတိုင်းကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုထိခိုက်စေပါတယ်, ဆေးလိပ်သောက်သည့်အဆုတ်, ပါးစပ်နှင့်လည်ချောင်းကင်ဆာနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်သိရပါတယ်။ "ဒါကအဆိပ်သင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပျ၏အများဆုံးဖြစ်ပွားနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်" ဟုဒါန-Farber ကင်ဆာအင်စတီကျုမှာအဆုတ်ကင်ဆာအထူးအဘယ်သူသည်ဒေါက်တာခရစ္စတိုဖာ Lathan, ရှင်းပြတယ်။
ဆေးရွက်ကြီးများကရက်စက်မှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဆေးရွက်ကြီးမီးခိုး 250 အန္တရာယ်ရှိသောဓာတုပစ္စည်းများပါဝင်သည်, au Moines qui ၏ 69 အဆိုပါ NCI selon, ကင်ဆာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ တချို့ကဆေးလိပ်သောက်စာတမ်းရည်မှန်းချက်အပြောင်းအလဲများကိုကာကွယ်မှုပေးပါဘူး, သူတို့ကထိုကဲ့သို့သောဆေးပြင်းလိပ်, ပိုက်နှင့် smokeless ဆေးရွက်ကြီးအမျှဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှု "ဘေးကင်း" ပုံစံများ, စဉ်းစားပါအဘယျသို့ပြောင်းရန်။ မဆိုဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုကင်ဆာနှင့်အတူချိတ်ဆက်ထားပါသည်။ ဒါဟာရုံမျိုးကိုဖလှယ်။
ထိုအခါအဘယ်ကြောင့်သူသို့မဟုတ်သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်ထိုကဲ့သို့သောအန္တရာယ်ဓာတုပစ္စည်းဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဘာသာရပ်မလား ဒါဟာအပေါငျးတို့သနီကိုတင်းနှင့် ပတ်သက်. ပါပဲ။ ဆေးလိပ်စွဲလမ်းဖြစ်ပြီး, နီကိုတင်းကိုအောင်နိုင်ဖို့အခက်ခဲဆုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ဘိန်းဖြူနှင့်ကိုကင်းနှင့်အတူရှိတက်အဆင့်။ လူငယ်တွေကပိုပြီးငြိမ်းချမ်းလုံခြုံတဲ့အခြားရွေးချယ်စရာ, သူတို့စွဲလမ်းအေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့သြ Are ရည်ရွယ်ချက်၏ search အတွက်စီးကရက်ငလှညျ့နေကြသည်။
အချို့လူများကဆေးလိပ်သောက်-related ကင်ဆာဖြစ်သောကြောင့်တစ်နေ့လျှင်တောင်မှတဦးတည်းစီးကရက်နိုငျသညျ, တစ်ရက်တစ်ခါသာဆေးလိပ်အားဖြင့်အလေ့အထ minimize လုပ်ဖို့ကြိုးစားပန်းတိုင် selon NCI ။ "သင်ပြုနိုင်သည်အဆိုပါတစ်ခုတည်းသောအကောင်းဆုံးအရာဆေးလိပ်သောက်ရပ်တန့်ဖြစ်ပါတယ်" ဟု Lathan ပြောပါတယ်။ "အချိန်ကျော်အန္တရာယ်ကအတော်လေးသုညသွားဘယ်တော့မှရည်ရွယ်, လျော့နည်းစေပါသည်။ "
အတော်လေးလွယ်ကူသည်မဟုတ်။ က 10 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကြိုးစားခြင်းယူ, ဒါကြောင့်နောက်တစ်ကြိမ်ကြိုးစားပါပြီးတော့ ... ကြိုးစားကြည့်ပါစို့။
ဆေးလိပ်သောက် '' တိုင်ကြားမှု: 1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669)
အမျိုးသားကင်ဆာဌာန Institute ရဲ့ Smoking Quitline: 1-877-448-7848
အမေရိကန်ကင်ဆာလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဘဝအတှကျအ Quit: 1-800-227-2345
အဝလွန်ခြင်းဟာ AICR selon ကင်ဆာ၏ဒုတိယအများစုမှာသိသိသာသာအန္တရာယ်အချက်ဖြစ်ပါသည်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ကင်ဆာသေဆုံးမှု၏အကြမ်းအားဖြင့်7ရာခိုင်နှုန်း။ ဤတိုင်းပြည်များတွင်အဝလွန်ခြင်း၏ပျံ့နှံ့ယခုအကြမ်းအားဖြင့် 40 ရာခိုင်နှုန်းနှင့်လူမည်းများနှင့်အစွမ်းကုန်ပိုမိုဘုံဖြစ်ပါသည်ကတည်းကအထူးစိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်ပါသည်။
အဆီပုံမှန်အားဖြင့်မလိုလားအကိုရွှေရုံအပိုဆောင်းရီဖိုင်း poundage အဖြစ်ရှုမြင်သည်ရည်မှန်းချက်တကယ်တော့ဒါဟာဆက်စပ်နေသည် 13 ကွဲပြားခြားနားသောကင်ဆာ။ အဆီပိုလျှံအတွက်, အထူးသဖြင့်သွေးဆုံးပြီးသားအမျိုးသမီးအတွက်, သားအိမ်, ရင်သားကင်ဆာနှင့်သားအိမ်ကင်ဆာ၏အန္တရာယ်ကိုကိုတိုးပှားနိုငျပါလာတဲ့အခါအီစရိုဂျင်, qui တွေတင်ခြင်းမှာကြောင်းပါပဲ။
နာတာရှည် low-level ရောင်ရမ်းပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များအခြားအချက်တစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါစေ။ ဥပမာ, gallstones ၏နာတာရှည်ရောင်ရမ်းခြင်း, အဝလွန်လူ est ဘုံ qui ကြောင့် DNA ကိုမှနောက်ဆုံးတွင်ကိုပျက်စီးစေနိုင်ပြီးသည်းခြေနှင့်ဆိုင်သောကင်ဆာဖြစ်ပေါ်။
PHOTO: မိုက်ကယ် Mroczek, Unsplash
ဒါဟာအလုပ်သို့မဟုတ်စပျစ်ရည်ကို-ရှိညစာအတူတစ်ဖန်ပြီးဘီယာနှင့်အတူပြန်ကန်ဖို့ဘုံအလေ့အကျင့်ပါပဲ။ ရည်မှန်းချက်ကိုသင်မည်သို့အတော်များများရှိသနည်း အရက်အလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုနှင့်အရက်အဖြေရှိထား: မိန်းမတို့အဘို့တယောက်သောက်သောနေ့, ယောက်ျားနှစ်ခု။ အဘယ်အရာကိုသူတို့ရဲ့သောက် deriving ခဲ့သည်? အဆိုပါ NIAAA အဖြစ်ကောင်းစွာဒါကများအတွက်အဖြေတစ်ခုရှိပါတယ်: ဘီယာ 12 အောင်စ, စပျစ်ရည်5အောင်စ, နှင့် 1.5 အောင်စ, ထိုသို့သော Scotch အမျှ 80-အထောက်အထားအရက်များ, ရွှေ, shot ။
သို့သျောလညျး, ဘီယာတစ် stein 44 အောင်စနှင့်တစ်စပျစ်ရည်ကိုဖန် 22 အောင်စကိုကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဘီယာစပျစ်ရည်ကိုသို့မဟုတ် chug ၏ဒါကဖန်လေးစားသုံးခြင်းသို့လှည့်။ အလွန်အကျွံအရက်, ဆေးလိပ်သောက်နှင့်အတူပေါင်းစပ်အထူးသဖြင့်အခါ, အများစုဦးခေါင်း၏ကင်ဆာနှင့်လည်ပင်းနှင့်အစာပြွန်, ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်ကောင်းစွာအသည်း, ရင်သားနဲ့အူမကြီး impact နိုင်ပါတယ်ဆက်စပ်နေပါတယ်။
အရက်တစ်နာကျင်ကျိန်းတစ်နှစ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့်ကင်ဆာဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ဒါကဆဲလ်ရဲ့ DNA ကိုပျက်စီးဖြစ်ပေါ်စေသည်နိုင်ပါတယ်။ မပေးရက်အဖျော်ယမကာအမျိုးအစား - - အန္တရာယ်အားတိုးတက်စေနိုင်ခြင်းကြောင့်ဒါဟာအရက်၏ပမာဏရဲ့စိတ်ထားပါ။
ကင်ဆာကာကွယ်နိုင်သောအကြောင်းတရားများ၏အကြမ်းဖျင်း5ရာခိုင်နှုန်း ACS selon, လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်ဆင်းရဲသောအစားအသောက်များတွင်ကင်းမဲ့ခြင်းမှစွပ်စွဲနေကြသည်။ အသစ်ဂါထာကိုပိုမိုပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ပါတယ် ... လျော့နည်းထိုင်။ ထိုသို့သောလမ်းလျှောက်အမျှအလယ်အလတ်-ပြင်းထန်မှုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုသုံးဆယ်မိနစ်တစ်ရက်, လောက်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအသီးအနှံ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, မြေတပြင်လုံးအစေ့, ပဲပင်နှင့်အခွံမာသီးများကျန်းမာစားအစီအစဉ်နှင့်အတူပေါင်းစပ်။ အာဟာရသာ 12 အောင်စတစ်ပါတ်နှင့်ထိုသို့သောမှာအားလုံးပါလျှင်, ရှားပါးသောကိုလောင်ခံရ shoulds အမျှလုပ်ငန်းများ၌အသား, ဘေကွန်နှင့်ဝက်ပေါင်ခြောက်မှအနီရောင်အသားများစားသုံးမှုကန့်သတ်အကြံပြုသည်။ အနီရောင်နှင့်လုပ်ငန်းများ၌နှစ်ဦးစလုံးအသားအူမကြီးကင်ဆာနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
ကူးစက်ရောဂါ: လူ့သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ, ဒါမှမဟုတ် HPV ပိုးက The အများစုမှာဘုံလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောဗိုင်းရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်က HPV ပိုးရည်ရွယ်ချက်ဆက်ရှိနေသေးလျှင်, သားအိမ်ခေါင်း, လိင်အင်္ဂါ, လိင်တံ, စအိုနှင့်လည်ချောင်းကင်ဆာဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်, ဆုံးကိစ္စများတွင်ပါကပပျောက်ရေးမှယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်သောသတင်းနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုဆေးများအတွက်ပို့ပြီးတစ်ကာကွယ်ဆေးထိုး-ထားပြီးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆုံးရောဂါကူးစက်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့တီထွင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုမကြာသေးမီကအမျိုးသမီးနှင့်ယောက်ျားပေါင်းကိုးခုနှင့်9၏ 45 entre les အသက်အရွယ်အဘို့အ Gardasil အတည်ပြုခဲ့သည်။
အရေပြားကင်ဆာ: အရေပြားကင်ဆာအရောင်ကလူတွေထဲမှာဘုံမဟုတ်ပါဘူးမေဲ့စွာ melanoma ၏ရှင်သန်မှုနှုန်း, အရေပြားကင်ဆာပိုသေစေနိုင်သောမျိုးကိုပြသသည်ဟုသုတေသန, လူမည်းအတွက်အနိမ့်ဖြစ်ကြသည်။ လူအပေါင်းတို့သည်မည်သို့ပင်အသားအရေသေံသငျ့သညျမြား၏ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုယူ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကနေနဲ့နေရောင်ကာကွယ်ဆေးသုံး, နေရောင်ကိုရှောင်ကြဉ်ဒါဟာနျဆုံး icts ရှိထားသည်နှင့်လိုက်တဲ့အခါအပြင်မှာအကာအကွယ်အဝတ်အစားများနှင့်နေကာမျက်မှန်ဝတ်ဆင်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်အလိုက်ပြပုံမှန်မဟုတ်သောလုံးထှကျရှိလာပါသို့မဟုတ်သင့်အသားအရေအတွက်လဲလှယ်မှုအတွက်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
ရုပ်ရှင်ပြသမှု: ရုပ်ရှင်ပြသမှုကုသမှုကိုပိုမိုအောင်မြင်သောအခါလဲလှယ်အတွက်သူတို့ကကင်ဆာသို့ပြောင်းလဲဖို့အခွင့်အလမ်းရှိမီ, သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာနှင့်အူမကြီးကင်ဆာများအတွက်ရည်မှန်းချက်စမ်းသပ်မှုမကြာခဏ Pre-ကင်ဆာဆဲလ်ရှာဖွေနိုင်သည်အစောပိုင်းအဆင့်တွင်ကင်ဆာ detect နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျကင်ဆာ-အခမဲ့စောင့်ရှောက်ကူညီပေးရန် Synergy အတွက်နည်းဗျူဟာစာတမ်းအလုပ်အားလုံး။ သင်ရုံတစျခုကိုင်တွယ်နိုင်လျှင်, သင်ပိုင်ခွင့်လမ်းကြောင်းအပေါ်ဖြစ်ကြသည်။ ထို့နောက်အချိန်ကတဦးတည်းခြေလှမ်းယူပါ။ "ကာကွယ်ခြင်းအန္တရာယ်လျော့နည်းစေ" Lathan ရှင်းလင်းချက်။
acute myeloid သွေးကင်ဆာ
ဒုတိယအရင်သားကင်ဆာကုသမှု combo အင်္ဂလန်ရဲ့ကင်ဆာမူးယစ်ဆေးဝါးရန်ပုံငွေအဖွဲ့မှဆက်ပြောသည်
Pogba pas Keane, Scholes et Cantona – Ole